Error using unicode-zawgyi combobox — MYSTERY ZILLION
Error using unicode-zawgyi combobox
March 2017 in Wordpress
unicode-zawgyi combobox ကို ကျွန်​တော့် wordpress မှာသုံးရင် ​တော်​တော် အဆင်​ပြေပါတယ် ၊ ဒါမဲ့ mobile ​ပေါ်​ရောက်ရင် side bar menu button က အလုပ်မလုပ်​တော့ဘူး ဖြစ်​နေပါတယ်၊ ဘယ်လို​ဖြေရှင်းလို့ ရမလဲသိပါရ​စ​ေ ခမျာ
combobox sidebar menu error
it was done at last7years :P nobody update it. You need to update the JS script.
Thanked by 1 K